Azonao atao ve ny mametaka base database? - Faq
Tena > Faq > Daty fidirana Unsplit fidirana - vahaolana azo tanterahina
Daty fidirana Unsplit fidirana - vahaolana azo tanterahina
Azonao atao ve ny mametaka base database?
Access Database afakamizara roa na fampiharana eo aloha na fampiharana any aoriana. Aorian'ity fizarazarana fisarahana ity dia miverenabanky angonamisy latabatra ary voatahiry ao amin'ny mpizara rakitra. Na izany aza, ny farany alohabanky angonany rohy dia misy ny endrika, ny fangatahana, ny tatitra, ny makro ary ny modules.
Salama daholo, misaotra anao nanatevin-daharana anay tamin'ny lahatsoratra iray momba ny Mike Accessing Shared Databases amin'ity lahatsoratra ity tiako horesahina ny tianay holazaina, ndao lazaina fa mizarazara ao anaty tahiry Access. Tianao ny miresaka momba ny antony itadiavanao hizara database iray Access, ary avy eo dia handeha hiresaka momba ireo fomba samihafa nampiantranoako ireo data tahiry aho ary toy ny ahoana ny fametrahana ny fizarana data. Ka ndao atomboka amin'ny inona ny tiantsika holazaina, ny momba ny fizarazarana ny database Access.
Ity misy sarin'ny tahiry iray izay tsy nizara roa. Manana rakitra Accessdatabase tokana sy rakitra ACC DB izahay ary mirakitra ireo zavatra isan-karazany antenainao ao amin'ny Databés Access Manana modely Fehezan-dalàna momba ny endrika endrika Macros Queries Takelaka dia mitovy fisie tokana ihany koa. Fandaminana tsara ity raha manana mpampiasa tokana ianao tahirin-kevitra izay hampiasainao dia lazao ny masininao hampiasainao manokana na ny milina tokana an'ny olon-kafa hampiasain'izy ireo manokana ka amin'ny famolavolana databatra iraisana dia manana angon-drakitra roa farafahakeliny tafiditra amin'izany izahay, manana angon-drakitra farany mihazona izahay mitazona ny endrika na tatitra, ireo modely kaody sy makrô ary ny fangatahanay ary manana ilay antsoina hoe tahiry aoriana miorina izay misy ny tabilao angona anay fotsiny izahay, tsy voatery ho ny tabilao angona rehetra, fa ny tabilao data tsirairay dia manantena ny hiova matetika ny sakafonao ary avy eo izay ataontsika ampifandraisinay ny angon-drakitra frontend miaraka amin'ny angon-drakitra backend, ataontsika ve izany ary ho hitantsika izany amin'ny lahatsoratra manaraka, fa mamorona latabatra mifandraika ao izahay mba hanananao fidirana latabatra eo amin'ny faran'ny voalohany izay toa tabl es fa tena manondro ireo latabatra ao anatin'izany end-enddatabase any aoriana izany Misy antony marobe izay antony hanaovantsika izany. Ny antony iray dia raha manana tontolon'ny mpampiasa maro ianao izay irinao ny olona maro hizara kopian'ny data fantatrao, ohatra, tsy tianao ny olona iray manova angona amin'ny olona B mba tsy hahita izany fanovana Data izany. Antony iray hafa mety tianao hanaovana izany dia ny fanamorana ny fametrahana rehefa manana tahiry tokana ianao izay mitazona ny tatitra rehetra sy ny modules ary ny latabatra ao anaty tahiry tokana ary andao hiteny hoe toa ahy ianao ary mivoatra amin'ny masinina ianao amin'ny mody ary atolotrao any amin'ny toeram-piasan'olona ny fanovana nataonao.
Ny tiako holazaina dia hoe, raha manatitra ianao dia hitondra database miaraka aminy, na amin'ny fonosana fametrahana na amin'ny kapila na zavatra mitovy amin'izany raha toa ka ny mpanjifanao dia manana tahiry fidirana iray ihany izay misy data izay tsy azonao soloina mora foana amin'ny kinovanao satria ny kinovanao hanana tahiry mitovy amin'ireo tabilao ireo rehefa nampiasa azy ireo tao anatin'ny tapa-bolana lasa teo am-panafatra kaody, dia nanampy data bebe kokoa izy ireo ary nanova angon-drakitra tao anatin'ireto latabatra ireto izay mbola tsy hita taratra tamin'ny kinovan'ireo latabatra ireo. Ka rehefa tonga eo amin'ny toeran'ny mpanjifanao ianao dia tsy maintsy manafatra sy manafatra ireo takelaka novaina avy amin'ny solosainao ka hatramin'ny kopian'izy ireo hanovana ny tatitra sy ny sisa sns sns izay mahatonga azy ireo ho sarotra kokoa ny mametraka amina endrika mizara toy izao, ireo mpampiasa rehetra ireo interfaces -Stuff dia tsy faran'ny aloha ary ny angona rehetra dia ao aorin-damosinao izay azonao alaina miaraka aminay Ny kopian'ny tendrony aloha ka soloina miaraka aminao ny kopiananao ary tsara ianao fa manana ny angon-drakitrao ho mora kokoa ny fametrahana Tsy voakitika Fanamarihana iray hafa momba ny famolavolana databatra iraisana Ity famolavolana ity dia somary sarotra kokoa hiasa ity, raha manana tontolon'ny mpampiasa maro hiasa ianao, ity lehilahy ity dia tokony ho amin'ny toerana afovoany ka mety hahazo ianao iray Mila karazana mpizara rakitra hipetrahana, na fiara ivelany io, na iray amin'ireo? Mankanesa any amin'ny birao na raha manana tamba-jotra feno miaraka amin'ny mpizara tambajotra ity lehilahy ity dia tokony hipetraka amin'ny toerana afovoany sy ny sisa amin'ireo olona ireo ary avy eo afaka mahazo vola ny volan'izy ireo, noho izany dia niresaka momba ny atao hoe base data izahay. Andao isika hiresaka momba ny mety ho endrik'izy ity rehefa mampita azy ianao ary ny tiako hanombohana azy dia ny tiako hizahana karazana fametrahana maro izay efa hitako, ary atombohy amin'ny angon-drakitra singlecombine tahak'ity iray ity, ary lasa iray mandingana ny rakitra feno Ny famolavolana database be pitsiny sy be mpampiasa, toa ny famandrihana mpizara mpanjifa, matetika dia manana tahiry tokana mitambatra atokana amin'ny PC an'ny olona tokana.
Ohatra, manana angon-drakitra fidirana maro izay ananako ao an-trano aho ary manara-maso zavatra fotsiny ho an'ny tenako ary tsy misy olon-kafa mila mahita azy ireo hipetraka eo amin'ny solosainako, azo ampiarahana izy ireo ary tsy misy olana iray ny zava-misy fa mitombo ny fahasarotana. Azonao atao ny mametraka toby iray mitambatra amin'ny milina marobe, fa raha manavao ny angon-drakitra ao anaty kopian'io olona io izy ireo dia tsy ho hitan'ireo olona roa ireo ny fiovan'ny angon-drakitra, fantatr'izy ireo fa ho an'ny kopia iray izy ireo ary havaozina ny angon-drakitra ary ianao fantaro fa mahita azy ireo ry zalahy, na ankehitriny ianao mikorontana, maninona ary ary aza manandrana maka tahaka ny famerimberenana izao satria lany daty ny dika mitovy amin'ny kinova 2013 dia tsy afaka ny ho mpikambana ao amin'ny club programmer cool okay azafady azafady azafady azafady eto ity C iray combo database izay napetrakay tamin'ny mpizara rakitra ary manana mpampiasa marobe izahay miaraka amin'ny hitsin-dàlana ho an'ity kopia ity ao amin'ny mpizara rakitra, manana olona marobe manokatra tahiry fitambarana mitovy ihany izahay. Nahita fanatanterahana mahomby aho tamin'ity fomba ity ary izany no mahatonga ahy mieritreritra fa mandeha izy io satria tsy fahita firy ny olona roa miditra ao amin'ity tahiry ity miaraka amin'ny B, raha manantena ianao fa hisy olona maro ho eo amin'ny fotoana iray, dia mety aza miasa ho anao Olona marobe miditra amin'ny UI iray ihany ary mifanerasera amin'ireo singa UI mitovy amin'ny endrika mitovy ary ny tsy hitako dia misy kolikoly ary mihidy ny tahiry, nefa ny iray amin'ireto karazana ireto ohatra dia mahazo ity karazana ity matetika. ny efijery manga amin'ny fahafatesana, indraindray misy hiccup amin'ny tamba-jotra ary very ny fifandraisanao amin'ny mpizara rakitrao eo afovoan'ny hazakazaka ary hitako voasakana ireo tahirin-kevitra ireo ary rehefa mitranga izany dia mila manana karazana backup ianao. mavitrika ary ny tahiry dia soloina tanteraka indraindray mba hahatonga azy io ho sarotra na iza na iza afaka miasa ho anao hoy aho amin'ny ar ar mety misy tranga izay mety ho ambany be ny fampiasana ambany ny toe-javatra ary indray rehefa manana izany tokana c ianao opy manavao izany kopia izany dia manana olana mitovy amin'izay niresadresakao ny fomba hanaparitahana ny mpanjakanao eto ianao dia namorona tahiry database Asplit ary nametraka ny tahirinkevitra roa tamin'ny mpizara rakitra iray mba hanananao mpampiasa marobe, ny sisin-dàlana rehetra dia manondro ny faran'ny aloha ihany ao amin'ny singa mpikirakira mpampiasa mitovy ary mahafinaritra ary mazava ho azy fa miverina miverina amin'ny tahiry backend miaraka amin'ny latabatra mitovy amin'ny olanao amin'ity iray ity, tsara fa manana mpampiasa marobe miditra ao anaty tahiry mitovy aloha ianao ka lasa mety ho olan'ny kolikoly indray raha Ireo tovolahy ireo dia nanana olana tamin'ny masininay raha mbola nanao zavatra tamin'ny solosain'izy ireo tao anatin'ity tahiry ity izy io, azo voahidy sy simba ary simba.
Mila soloinao ny Soloy ity kopia ity mba hamahana ireo olan'ny tamba-jotra saingy tsy voalaza fa manana fametrahana roa aho eo amin'ny sehatry ny tahiry iray ihany, izay samy fanekena hoe avy amin'ny serivisy mpizara Citrix izy ireo, ary mikarakara ny Citrix amin'ireo kopian'ny mpizara samihafa ireo amin'ny mpampiasa samihafa, tena mandeha tsara io, tsy mbola nanana olana kolikoly tamin'ireo mpanjifa ireo aho ary nanana an'io fandaminana marina io izy ireo, fa ny Citrix no misahana azy, samy hafa ny mpampiasa Mba manome kopia rehefa ilain'izy ireo izany. Ity kinova ity dia mandeha tsara ary ny fandaminana farany na paradigma anay, raha sitrakao dia famolavolana databatra mizara izay maka tahaka ny filaminan'ny mpizara mpanjifa ary eto izahay dia mametraka kopia iray amin'ny sisiny aloha amin'ny PC an'ny mpampiasa tsirairay avy eo manana ny fiafarany izahay na eo amin'ny mpizara rakitra mampiasa ireo fialamboly ireo aza ary mifandray amin'ny backend amin'ny tambajotra dia haingana kokoa noho ity raha manam-bola amin'ny mpizara ianao mba hahafahan'ireto bandy manokatra ny database, eny fa na dia ny database aza dia somary lavitra ary mila mihoatra ny tambajotra miditra amin'ity solosaina PC ity alohan'ny faran'ny fotoana fidian'izy ireo dia te-hanomboka sy hihazakazaka ny endrika rehetra na ny endrika rehetra tadiavin'izy ireo hampiasa ireo modely kaody izy ireo ary hifandray amin'ny tamba-jotra alohan'ny tena hampiasan'izy ireo ny angona, isaky ny manokatra endrika vaovao indray izy ireo dia ny endrika tadiaviko ary ny fangatahana dia ampiharina ao amin'ity kinova ity dia tsy azonao ary afaka milaza marimarina aho fa afaka milaza mazava tsara avy amin'ny fandinihana mivantana miaraka amin'ireo endrika ireo, ary ny fangatahana sy ny tatitra. amin'ny mafy manafaingana haingana ny fidirana. Azoko atao ny mahita anao hanafainganana azy ara-pahitana ary manao an'izany ianao fa tsy ny samy manana ny eo aloha sy ny ao aoriana dia mijanona amin'ny mpizara rakitra iray ihany rehefa voalaza ny zava-drehetra fa tsy misy mazava, tsara amin'ity tranga ity, ankehitriny hoy izahay fa manana fametrahana mora kokoa izahay hatramin'ny raha te-hisolo ireo fiafarana mahafinaritra ireo aho dia afaka mitondra ny sisiko vaovao sy maka tahaka azy ireo ary marina izany nefa mety hahasadaikatra izany, raha tsy misy olona 2 na 3 ary ao amin'ny birao iray ihany izy ireo fa ahoana raha fantatrao fa mpampiasa 30 afaka manahirana ny saha misy ny data misy azy roa ireo mpampiasa - mifarana amin'ny solosaina ny telefaona, manondro azy ireo koa ilay fatorana antsoiko hoe fanamarinana kinova ary hihazakazaka izy ary hizaha ny faran'ny fahafinaretana hafa eo aminao. ny solosaina dia mitovy dika amin'ny dika mitovy amin'ny tompoko ao amin'ny mpizara ary manokatra ity angon-drakitra ity ny mpanamarina kinova ary manomboka mampiasa izany izy ireo rehefa hitany fa ny kinova amin'ny solosain'izy ireo dia kely noho ny master copie napetrako eto sy ilay mpanamarina kinova natao a kopia rakitra averina averina eo ambanin'ny solosain'izy ireo ny m avy eo Fa azo antoka raha mandeha amina famolavolana database ianao dia mamporisika anao aho hanandrana an'ity kinova ity, hino aho fa io no ho haingana indrindra ho anao ary amin'ny farany angamba heveriko fa ho hitan'izy ireo haingana kokoa izany ary ho ianao sambatra kokoa miaraka aminy, okay, izany no ananako amin'ity lahatsoratra ity.
Te-hamaritra ny atao hoe base data sy ny antony tokony hanaovantsika azy aho ary ny mety ho endrik'izany amin'ny drafitra midadasika sy ireo lahatsoratra roa manaraka izay kasaiko haseho ny fomba fizarana angon-drakitra efa misy ary ny fomba famoronana tahiry ifampizarana avy hatrany. noforonina. Izahay dia handrakotra ny fametrahana tenimiafina ho an'ny angon-drakitra sy ny fomba hiatrehana azy amin'ny tahiry ifampizarana ary tiako aseho ny VBA izay ampiasainay mba hahitana ireo tadin'ny fifandraisana amin'ireo latabatra misy ifandraisany, izany no rohy avy eo amin'ny faran'ny farany izay dia ao amin'ny lahatsoratra manondro ny backend. Aorian'izany dia tiako ny mamerina ny zavatra nianaranay tao momba ny fomba hiatrehana ireo tadin'ny fifandraisana ary hahita azy ireo ary mamaky ireo rakitra mamaky lahatsoratra avy amin'ny andiany Lastarticle ary hamorona kaody izay handeha amin'ny fanombohana ary ny eo anoloana dia hifanaraka ho azy amin'ny Backend azonao rohy tahiry, ka ohatra manana kopian'ny angon-drakitra ao amin'ny solo-sainako aho ary mifandraika amina tahiry iray ao amin'ny solo-sainako io ary rafitra fampirimana hafa tanteraka izany ary manana ny solo-sain'izy ireo ao amin'ny biraony ny mpanjifako, ka mazava ho azy fa tsy raiso ny kopiako amin'ny faran'ny aloha ary apetaho amin'ny masininao any amin'ny birao, tsy hitanao ny faran'ny aoriana ary ao amin'ny biraonao ianao mitady azy fotsiny, mbola mitady ny rohy manondro ny faran'ny aoriana Asehoy ny milina ao an-trano ka ny kaody no tanterahina ary mandeha ho azy ny solosainao.
troubleshooting logitech k800
Mihazakazaka mandeha ho azy ny biraonao, mora kokoa ny manao Fanavaozana toy izay mamaky ny rohy amin'ny tanana ary mampiasa izany rohy izany avy amin'ny Manager Manager ary aorian'izany dia tsy azoko antoka fa afaka manao lahatsoratra amin'ity fanamarinana kinova ity aho, fa fotsiny aho niresaka momba izany minitra vitsy lasa izay, manantena aho fa tian'ity rangahy ity ity lahatsoratra ity, antenaiko fa nitondra zavatra fisaorana noho ny fijerena anao ary ho hitanay amin'ny manaraka ianao
Ahoana no fomba hidirako indray amin'ny base database Access?
Ny mila ataonao fotsiny dia, amin'ny faran'ny farany hamafa ny latabatra rehetra mifandray. Avy eo mandehana any amin'ny IMPORT>Fidirana> ary avy eo safidio ny backend anao ary safidio ny IMPORT fa tsy ny LINK ary fidio ny tabilao rehetra.
Ahoana no fomba hamerenako ny base database?
Ahoana ny fomba hamerenana ny angon-drakitra voazara
Sokafy ny faran'ny alohabanky angona.
Sokafy ny mpitantana Link ary hamafa ireo rohy rehetra.
avy eo ampidiro ny angona avy any amin'ny farany aorianabanky angona.
ovay ny tabilao data ho an'ny endrika rehetra, tatitra momba ny fangatahana sns amin'ny latabatra nafarana? Mety ve ny fiheverako an'ity dingana ity sa tsy ilaina izany?
Indraindray ny angona ilainao dia miparitaka amin'ny tahiry roa na maromaro. Na dia azo atao aza ny manasaraka ny efijery hahazoana fomba fijery marindrano na mitsangana ny angona, dia matetika kokoa no mora kokoa ny manambatra ireo angon-drakitra mba hamoronana rakitra vaovao. Ity ny fomba fanaovanao azy.
Sokafy ny tahiry izay ho rakitrao voalohany, raha izany dia hampiasa ny angon-drakitra mifampiraharaha miaraka aho. Sokafy izao ny rakitra ho an'ny mpanjifa ary zarao marindrano ny efijeryo. Rehefa mijery ireo rakitra ireo aho dia hitako fa samy manana ny laharan'ny mpanjifa izy ireo.
Izy io dia fantatra amin'ny fanalahidy ary ny angon-drakitra ampiasaiko hananganana ny fifandraisana eo amin'ireo rakitra roa ireo. Mba hanaovana izany dia mila mahazo antoka aho fa ireo saha roa ireo dia karazana data mitovy - izay midika fa ny tarehintsoratra na ny roa dia tarehimarika na inona. Arotsaho eo ambonin'ireo lohateny an-tsaha ny totozyo isaky ny rakitra hijerena ireo karazana data.
Amin'ity tranga ity, izy roa dia samy tarehintsoratra mba hahafahantsika miroso amin'ny famoronana hitsin-dàlana ho an'ity saha ity, alaivo antoka fa ny fifantohana dia mifototra amin'ny tahiry angon-drakitra ons amin'ny alàlan'ny fipihana ny takelaka 'Header', avy eo ny takelaka Tsindrio ny 'Analysis' ary kitiho ny ' Midira 'ao amin'ny vondrona' Link '. Miseho ny boaty fifanakalozan-kevitra Join Databases. Hamarino tsara fa namintina ny Fifanakalozana ho toy ny tahiry voalohany.
Ao amin'ny faritra database Secondary, kitiho ny Select raha hisafidy izay rakitra tianao hampifandraisina amin'ny Fifanakalozana voaangona. Tianay ny mpanjifa. Safidio ity rakitra ity ary kitiho OK.
Azonao atao ny misafidy izay saha tokony hiseho amin'ny vokatrao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Fields. Ny saha rehetra dia voafantina tsy misy fangarony. Manaraka, mampiditra anarana ho an'ny data vaovao.
Antsoiko hoe fifandanjan'ny mpanjifa izany. Manaraka izany, mila ilazanao amin'ny IDEA ny saha tokony hampifandraisina ireo rakitra. Tsindrio ny bokotra Match ary safidio ny safidin'ny mpanjifa ao amin'ny saha Kilonga.
Ataovy toy izany koa ny eny amin'ny saha Secondary. Mariho fa ny anaran'ny saha dia tsy tokony hitovy, fa ny karazany kosa dia tsy mitovy. Tsindrio OK raha hiverina amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra Connect Databases.
Farany, mila mamaritra izay karazana fifandraisana IDEA tokony hataonao ianao. Misy safidy dimy izay hazavaina tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fametahana azy ireo. Arotsaho ny safidy tsirairay ary diniho ny kisary Venn sy ny fanazavana miseho.
Safidio ny safidinao rehetra amin'ireo rakitra roa ary kitiho ny OK mba hamenoana ilay rohy. Ny fisieo vaovao dia tokony hanana rakitra 351. Notantaraiko teo aloha ato amin'ity andian-dahatsoratra ity ny tantara ary nilaza aho fa mirakitra ny zava-drehetra natao tamina tahiry iray.
updateorchestrator reboot tsy mandeha
Andao hosokafantsika izany ary ho hitantsika ny endriny, ary koa ny sasany amin'ireo fampahalalana hafa azonao atao. Miaraka amin'ny fifandanjan'ny mpanjifa ho toy ny rakitra mavitrika, kitiho ny History ao amin'ny pane amin'ny fananana, ampitomboy ny fizarana tsirairay amin'ny log ary zahao izay fampahalalana azo eto. Natambatra ireo rakitra roa ireo, hitako fa misy rakitsoratra 351, manana firaketana 10 tsy mitovy aho ao amin'ny rakitra voalohany ary 48 ny rakitra tsy mifanaraka amin'ny rakitra faharoa. Ny rakitra voalohany dia ny fifanakalozana fifanakalozana ary ny rakitra faharoa dia ny tahiry ho an'ny mpanjifa.
Midika izany fa misy firaketana 10 ao amin'ny rakitra fifanakalozana ho an'ny mpanjifa izay tsy ao anaty rakitra mpanjifako. Ireo tahiry faharoa 48 tsy mifanaraka dia tsy mampatahotra daholo - maneho ny mpanjifa izay tsy nanao fifampiraharahana nandritra izany fotoana izany izy ireo. Avereno jerena ny fizarana kaody IDEA Script amin'ny tantara.
Raha mila manao an'io asa manatevin-daharana io indray ianao dia afaka mampiasa ity fizarana kaody ity hamoronana makro ho azy. Kitiho ny angona ao amin'ny fikandrana Properties mba hiverenanao amin'ny Data View. Nampiasa tantara ianao hianarana bebe kokoa momba ny angon-drakitrao, ary izao dia te-handinika ireo angona ianao hahitanao ireo firaketana tsy mitovy.
Tadiavo ny laharana firaketana 9. Jereo fa foana ny saha CUST_NO1. IDEA dia manana fiasa antsoina hoe 'Asehoy ny firaketana rehetra' izay hanampy anao hamantatra ireo firaketana mitovy amin'izany.
Kitiho havanana amin'ny habaka ambanin'ny Cust_no1 ary safidio Asehoy ireo rakitsoratra rehetra ao anaty fononteny foana. Hiseho ny boaty fifampiresahana. Ity boaty fifampiresahana ity dia miasa mitovy amin'ny fametrahana sivana ao amin'ny Equation Editor, fa manome interface ho an'ny famoronana ny equation.
Tsindrio OK. Ianao izao dia manana sombin-tahirin-kevitrao miaraka amin'ireo firaketana 10 izay tsy nisy fidirana mifanaraka aminy ao amin'ny rakitra momba ny database an'ny mpanjifa. Mariho fa ireo masontsivana noforonina tao anaty boaty fifampiresahana dia hita ihany koa ao amin'ny mari-pahaizana momba ny fananana.
Azonao atao ny mitahiry an'ity rakitra ity raha tianao. Amin'izao fotoana izao dia hiverina amin'ny rakitsoratra feno aho, tsindrio havanana amin'ny rohy misy ny fenitra ao amin'ny fikandrana fananana ary fidio ny Delete; avereno ny dingan'ny fitokanana rakitra, mahita ny mpanjifa rehetra mbola tsy nahavita varotra tao anatin'ny vanim-potoana, tsindrio havanana ny fidirana rehetra ao amin'ny tsanganana AMOUNT_SUM. Hamarino tsara fa ny mpandraharaha dia ny marika == ary alao antoka fa 0,00 ny sandany ary tsindrio OK.
Tokony hanana rakitsoratra 49 ianao araka ny hita eo amin'ny fikandrana IDEA etsy ambany.
Ahoana no famerenako ny database Access?
Miverina indrayloharanom-baovao na tabilao mifandray
Misafidiana angona ivelany> Mpitantana latabatra mifandray. ...
Ao amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra mifandray amin'ny table manager, mifidiana loharanom-baovao na tabilao mifandray. ...
Na tsiaFidiranamamantatra ny loharanom-baovao,Fidiranamanentana anao hanana toerana loharanom-baovao vaovao.
Inona no mitranga rehefa tsy apetrakao ny base database MS Access?
Ny backend dia manampy amin'ny fiarovana ny famolavolana ny data. Ary ity mpampiasa tsy afaka miditra mivantana amin'ny latabatra amin'ny alàlan'ny zavatra interface ity eo amin'ny farany farany. Aorian'ny fametahana ny data database MS Access dia mety manova na mamafa ny tabilao ny mpampiasa anao. Noho izany, ny famafana ny base database dia misy fiatraikany ratsy.
Azo zaraina ho faran'ny aloha sy farany aoriana ve ny database?
Fa alohan'izay dia avereno jerena haingana ny momba ny Split Of Access Database. Ny Access Database dia azo zaraina ho an'ny rindrambaiko manoloana na ny fampiharana any aoriana. Aorian'ity fizarazarana fisarahana ity dia misy latabatra ny tahiry aoriana ary apetraka ao amin'ny mpizara rakitra.
Fa maninona no nozarain'i SQL Server ny tahiriko momba ny fidirana?
Nozarazaraina tsy nahy ny tahiry amin'ny alàlan'ny Access Database fa tsy SQL Server. Mampalahelo fa ny backup dia tsy vita talohan'ny fisarahana ary misy fiovana marobe amin'ny programa satria ny backup farany misy anarana rakitra hafa. Mila mihazakazaka ny tendrony aloha amin'ny solosaina telo aho ary ny iray aoriana kosa amin'ny iray.
Inona no azoko atao amin'ny angon-drakitra MS Access?
Ity safidy ity dia ny Access Repair And Recovery Tool ho an'ny troubleshooting efa ela sy ny vahaolana momba ny olan'ny MS Access Database.